3 ဘုရားသခင့ငြင်းပယ်ရန်နည်းလမ်းများ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
သင်ဠာ၏ဘုရားသခငျကိုငြင်းပယ်ကြပြီ? ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ, ဒီကြှနျုပျတို့အားလုံးစဉ်းစားရန်အဘို့အအရေးပါသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာထာဝရအသကျလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘုရားသခငျသညျကိုးစားသောသူတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာ၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်နှင့်သူ၏ဧဝံဂေလိယုံကြည်, ပဲတရားစီရင်ခြင်းကိုကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်သောသူတို့အပျေါမှာထွက်ယူသွားတတ်၏. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကငွငျးပယျဖို့ပိုတစ်ခုထက်လမ်းလည်းမရှိ. ဒီနေရာမှာငါဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာတွေ့ရှိသုံးခုရှိပါတယ်.
“အဘယ်သူသည်မုသာကိုသုံးသောသူကားသူသညျယရှေုခရစျတျောဖွစျကွောငျးကိုငြင်းပယ်သောသူ? ဒါကအန္တိခရစ်ဖြစ်၏, ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုငြင်းပယ်သောသူသည်. သားတော်ကိုငြင်းပယ်သောသူတယောက်မျှမညျးတျောကိုရှိပါတယ်. အကြင်သူသည်သားတော်ကိုဝန်ခံလည်းမညျးတျောကိုရှိပါတယ်။”
1 ယောဟနျသ 2:22-23
ဝိညာဉ်ရေးရာသို့မဟုတ်ပင်ဘာသာရေးလူအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစားတော်မူသောငါတို့၏ကမ္ဘာကယနေ့အတွက်များစွာသောလူရှိပါတယ်. သူတို့ကဘုရားသခငျသညျရှိကွောငျးယုံကြည်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်သူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ကြိုးစား. ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ပင်တို့သည်ကြီးစွာသောဆရာသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်ထံမှပရောဖကျတအဖြစ်သညျယရှေုကိုမွငျ. ဒါပေမဲ့သူတို့သညျယရှေု HE သူကပြောပါတယ်သူအကြောင်းမယုံကြည်ကြပါလျှင်, သူတို့ကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်ကြသည်.
ယရှေုသညျရုံကွီးစှာသောကိုယ်ကျင့်တရားဆရာမနေဆဲကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခငျသညျငွငျးပယျဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ကိုမြင်လျှင်. ဘုရားသခငျသညျဤလောကကိုအစိုးရသောကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယေရှုအားကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစူးစိုက်ညွှန်ကြားတော်မူငါတို့အားတစုံတခုသောအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းခရီးမပူဇော်ဘူး (ယောဟနျသ 14:6, တမန်တော်ဝတ္ထု 4:12).
ဒါကြောင့်သညျယရှေုသညျဘုရားသခငျငွငျးပယျဖြစ်ပါတယ်ငွငျးပယျ. ဒါပေမဲ့, ယောဟနျသအဖြစ် 1:12 ကပြောပါတယ်, "သူ့ကိုခံယူပွုခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အား, အဘယ်သူသည်မိမိနာမအကိုယုံကြည်, သူသညျဘုရားသခငျ၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။” မည်သူမဆိုသညျဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်နိုင်, သူတို့သညျယရှေုအပေါ်သို့ယုံကြည်လိုလျှင်.
“ဒီတော့လူတိုင်းလူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုဝန်ခံသောသူ, ငါသည်လည်းကောင်းကင်အတွက်မူသောငါ့အဘကိုရှေ့တော်၌ဝန်ခံမည်, ဒါပေမဲ့အကြင်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုငြင်းပယ်, ငါသည်လည်းကောင်းကင်အတွက်မူသောငါ့ခမည်းတော်ရှေ့မှာငွငျးပယျပါလိမ့်မယ်။”
ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ယရှေုသညျငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌သခင်သည်ကိုဝန်ခံကြဘူး. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆဲအခြားသူများကိုရှေ့တော်၌ကိုယ်တော်ကြောင့်ရှက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုကိုငြင်းပယ်နိုင်. ယခု, ငါတို့ရှိသမျှသည်အခြားသူများကိုရှေ့တော်၌ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းဝန်ခံဖို့နှေးကွေးခဲ့ကြ. ကျနော်တို့ဘာသာရေးနှင့်အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ဦးတည်တိုးရန်လိုသောယဉ်ကျေးမှု၌နထေိုငျ. ခရစ်ယာန်များသည်မိုက်မဲကိုယုံကြည်သူအ morons အဖြစ်ခြယ်သကြသည်, အန္တရာယ်ရှိသော, နှင့် bigoted ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ. ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံနောက်ကျောကျုံ့မှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, ကျွန်တော်တို့ထင်သောသူတို့သည်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်ခင်နဲ့ယရှေုသညျအသိအမှတျပွုဖို့ငြင်းဆန်.
ဒီကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ယရှေုသညျသေးငယ်တဲ့ကြည့်ရှုစေသည်ကြောင့်သူဟာကြောင်းအရာအားလုံးကိုတစ်ငြင်းပယ်င်. သို့သော်သတိပေးခဲ့သည်ခံရ, ကျွန်တော်တို့လူတို့ရှေ့မှာသညျယရှေုကိုငြင်းပယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်, သူသည်လည်းခမည်းတော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုငွငျးပယျလိမျ့မညျ. ယရှေုသညျကပြောပါတယ်မဟုတ်လျှင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ရပ်သောအခါ, "သူကငါနှင့်အတူအဖွင့်,” ကျနော်တို့ထဲမှာဆိုတော့မင့်. ခရစျတျောမှအသင့်လျော်တုံ့ပြန်မှုအရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည်မဟုတ်, ရဲရငျ့စှာနှငျ့အခွားသူမြားရှေ့တော်၌ကိုယ်တော်မျှဝေဖို့စိတ်အားထက်သန်ပေမယ့်.
သငျသညျတော်တော်လေးကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်င်တူဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤအချက်မှာသင်ခံစားရ. သငျသညျခရစျတျောသညျယရှေုအဖြစ်ဝန်ခံ, သင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းပြောဂုဏ်ယူ. သင်တို့အဘို့အကြှနျုပျအလာမည့်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, "သင်၏အသက်တာကိုအဘယ်သို့ပြောပါဘူး?” ကျွန်တော်တို့အိမ်ခေါင်မိုးထိပ်ကနေကြွေးကြော်ရန်အဘို့အဒါဟာ "ဖြစ်နိုင်ယေရှုသည်သခင်ဘုရားသည်ငါသူ့တပည့်ဖြစ်၏!” သေးငါတို့စကားကိုထုတ်ရေနစ်ဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးဘဝများ.
တိတုခုနှစ်တွင် 1, ပေါလုကသူတို့၏အကျင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင့ငြင်းပယ်ဆရာအတုအယောအကြောင်းကိုပြောသော. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကိုဆန့်ကျင်သောလမ်းအတွက်အသက်ရှင်နိုင်. ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအားအစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ရာလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်သင့်အသက်တာဘာမှမတူလျှင်ပြောင်းလဲသွားပြီ, အရာတစ်ခုခုကိုလက်ျာမဟုတ်ပါဘူး. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအဘို့ဘုရားသခင့်ကောင်းသောအစီအစဉ်၏တစ်ဦးငြင်းဆိုသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏မာနထောင်လွှားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို၏အလယ်ဗဟိုအဖြစ်သညျဘုရားသခငျ၏နေရာထိုင်ရာတစ်ဦးငြင်းဆိုသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနာခံမှုတို့အားလုံးအားလုံးဖန်ဆင်းခြင်းအခွင့်အရေးများသခင်အဖြစ်သညျဘုရားသခငျ၏အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုငြင်းဆိုသည်.
သငျသညျစကားသည်ယရှေုသညျအသိအမှတျပွုစခွေငျးငှါ, ဒါပေမဲ့သင်၏အကျင့်ကိုကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်ကြဘူး? သငျသညျကိုအခြားသူများမေတ္တာရှင်နေကြတယ် (ယောဟနျသ 15)? သငျသညျကိုယျတျောကိုနာခံနေကြပါတယ် (ယောဟနျသ 14:15)? သငျသညျအသီးကိုသီးကြသည် (ဂလာတိ 5:22-23)? သငျသညျယဇျပူဇျောအခြားသူများအားကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်အရင်းအမြစ်များကိုပေးကမ်းကြသည် (2 ကောရိန္သု 8:1-5)? သငျသညျသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ဘုရားသခင်ရှာကြသည်?
ကျွန်တော်တို့အများစုကဤအချက်များမှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုသူအပေါင်းတို့၌ကိုယျကိုအခြို့မြင်ရကြလိမ့်မည်. သငျသညျသောကွောငျ့သငျသညျကိုယျတျောကိုငြင်းပါတယ်နည်းလမ်းအရှက်ကွဲခြင်းကိုခံစားရပြုလျှင်, ဧဝံရှိပါတယ်. ဘုရားသခငျ၏တောင်မှငြင်းပယ်သညျယရှေုအားဖြင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်, ကျွန်တော်တို့ပတေရုသနှင့်အတူဒါကြောင့်ရှင်းလင်းစွာမြင်သည်အတိုင်း. သငျသညျငြင်းပယ်၏အပြစ်မှလွှဲလိုလျှင်, ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိ, အပြစ်မှလွှတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်.
ခရစ်တော် fam ယုံကြည်ကိုးစား Keep.
ဗစ်တာ • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤလိုအပ်. အထူးသဖြင့်လျှို့ဝှက် “/
Daniely • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ! :)
သောမတ်စ် Stewart က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အံ့သြစရာ post ကို! ဒါဟာကျိန်းသေငါ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်များအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှအကြှနျုပျကိုပြောင်းရွှေ့. အသေးစား digression…တိတုအတွက်ရည်ညွှန်းကျမ်းဖြစ်သင့် 1:16, မဟုတ် 2:16. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျဘုရားသခငျ၏အားကောင်းလူကိုသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါစေ!
ဝီလျံ • မတ်လ 27, 2018 တွင် 2:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Excellent ကအစ်ကိုဘုရားသခငျသညျ, ငါဆက်သုံး!!!
ဧည့်သည် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသညျအမှနျတကယျသညျယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏သားတျောကိုဆုံးရှုံးသူတိုင်းတဦးတည်းရွေးနှုတ်တော်မူရန်ဤမြေကြီးသို့စလှေတျတျောယုံကြည်. သို့သော်ဆိုပါတယ်ခံကြောင်း, ငါတခြားလူန်းကျင်တစ်ရှက်လူတစ်ဦး၏ကြင်နာဖြစ်ကြောင်းကို, ငါသခင်ယေရှုနှင့်ဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းကိုစကားပြောဆိုမှုပါဝင်မလူမှုရေးအခါသမယအတွက်အဆင်မပြေ get, ငါအကျိုးဆက်များကိုကြောက်မိပါတယ်ခန့်မှန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုအကြောင်းပြောနေတာပါဝင်ပါဘူးသောပြောဆိုမှုများတစ်ဦးတည်းပါစေ. အဘယ်သို့ငါဒီကိုကွောကျရှံ့ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်? ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအချို့ကကျမ်းပိုဒ်?
ပိန်လှီသော • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
စကားဝိုင်းများဆန့်ကျင်ခရစ်ယာန်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိုဖွင့်ဟန်သောအခါငါအများကြီးစစ်တပ်အတွက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရလေ့ရှိသောကြောင့်ထိုကြိမ်မှကြွလာသောအခါငါအမှန်တကယ်သင်သည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုနားလည်ကြပါ. တကယ်တော့ကိုယ့်ကတခြားနေ့ happend… တစ်ဦးကကပ္ပတိန်တပါးမွကွေီးပျေါမှာလူသားမြားသဖန်တီးခြင်းနှင့်သူတို့ကိုအကြောင်းကိုသည်သူ၏ယုံကြည်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ငါ့အားမိန့်တော်မူ. ဒီအမြင်နှင့်အတူ၎င်းကအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်သမိုင်း Channel ကိုပေါ်မှာအများကြီးလာ (ရှေးဟောငျးအီဂတပါး). ဒီအမြင်အကျွန်ုပ်ကိုရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သော်လည်း, ငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မယုံကြည်ကြဘူး. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့သခင်သည်များအတွက်စကားပြောမှကြွလာသောအခါငါ ok အလုပ်အကိုင်များလုပ်ဖို့လေ့. တခါတရံကျွန်မဦးနှောက်အာရုံကြောပေါ့, တခါတရံငါမင့်, ဒါပေမယ့်အရေးကြီးဆုံးအရာပြောဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်. သင်ယုံကြည်ဘယ်အရာကိုထင်ရှားစေကြလော့. ရဲစွမ်းသတ္တိကျနော်တို့ကြောက်နေကြတယ်သော်လည်းတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်. လုံးဝရိုးသားဖို့, အဆုံး၌ဤကောင်လေးငါ့ကိုတော်တော်မိုက်မဲကိုကြည့်လုပ်. ငါအများကြီးဆို့, ငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်း၏နောက်ကျောကိုငါရှိသတင်းအချက်အလက်အများကြီးကိုမေ့, နှင့်လုံးဝအလွတ်သွား၏. ငါမိုက်မဲခံစားရတယ်ငါမိုက်မဲကြည့်ရှုသေချာပါတယ်. သို့သော်, ငါသည်ငါ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်သူငါကအဘို့ကြီးစွာသောအမှုလုပ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကြားမှယုံကြည်အတိအကျသိ. ဤသူသည်ငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ယုံကြည်; နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း. ငါနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် rediculous ခံစားခဲ့ရ, ဒါပေမယ့်အခွင့်အလမ်းဘုရားသခင်အကြောင်းပြောဆိုရန်တဖန် လာ. လျှင်ငါနိုင်ငံဘို့အလိုငှါနောက်တဖန်လူအပေါင်းတို့ကိုကျော်လုပ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်အရမ်းရယ်ရတယ်မျှသံသယလာမယ့်အချိန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်… မြျှောလငျ့စှာ. ဒါဟာအားလုံးဘုရားသခငျသညျအဘို့အသကျရှငျနအကြောင်းကိုဖွင့်, နဲ့ခရစ်တော်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အဘို့အသကျရှငျနငါတို့သည်ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့် harrased ပါလိမ့်မည်သိမြင်. အဆိုပါအရေးကြီးသောအရာသည်ဘုရားသခင်ကိုထရပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ငါသည်ဘုရားသခင်တစ်ဦးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်အခြေအနေမှာဘုရားသခင်အဘို့စကားပြောကာကြောက်တယ်နည်းနည်းကောင်လေး attemt ကြည့်ဖို့ချစ်သောသူစိတ်ကူးစိတ်သန်း, ထို့နောက်တွေ့မြင်အဓိက theologan သည်သူ၏လမ်းကြောင်းကိုအတွက်အသီးအသီးပိတ်ပစ်. ငါသူကားတိုင်ပေါ်တွင်အခါသညျယရှေုကိုအခြားသူများမှတူသောအရာကိုအံ့ဩခြင်း. ငါမိုက်မဲညာဘက် fit မယ်လို့ထင်ပါတယ်, သူသညျဘုရားသခငျဖွစျဖို့အခိုင်အမာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သေးအခြားသူများကိုသူပင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုချွတ်သူ့ကိုယ်သူကူညီ couldnt ကြောင်းကိုသိမြင်. သူကငါ Captian နဲ့ငါ့စကားပြောဆိုမှုအတွက်အခြားသူများအားမိုက်မဲကြည့်ရှုမိနည်းတူအခြားသူများမိုကြည့်ရှု, ဒါပေမယ့်ငါသည်ခမည်းတော်ကားတိုင်ပေါ်တွင်သခင်ယေရှု၏ထင်သောအရာကိုအံ့ဩခြင်း… မာနထောင်လွှားငါယူဆ.
“ခန္ဓာကိုယ်ကိုသတ်သောသူတို့၏အမျိုးအ affraid ဖြစ်မနေပါနဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမသတ်နိုင်သော. အဲဒီအစားငရဲ၌ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ဖကျြဆီးနိုငျသူတဦးတည်း၏ affraid ဖြစ်လိမ့်မည်။”
Aleisha • ဒီဇင်ဘာလ 2, 2014 တွင် 8:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါဒီမှတ်ချက်ကယ့်ကိုဒီနေရာမှဒီဇင်ဘာလ၌ငါ့ကိုလုပ်ကျွေး 2014. ကိုယ့်ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်အလိုငှါဘုရားသခင်၏ဟုမေးနှင့်ကိုယ်တော်ကိုမငြင်းဖို့ကျွန်မကိုကူညီဖို့ရန်နှင့်အစဉ်အမြဲငါသူ LLord ဖြစ်ပါတယ်သက်သေပြဖို့ရှိပါကငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါ့ခမည်းတော်ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ကိုကြည့်ဘယ်လောက်မိုက်ဂရုမစိုက်ပါဘူး, ငါယေရှု LOVE.
TonyStartk • မတ်လ 5, 2018 တွင် 8:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Thor စကားကိုနားထောငျ, မိုဃ်းချုန်း၏ဘုရား.
Mireyjesu • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
1 ကောရိန္သု 1:17, ဧဖက် 6:18-20
ဧည့်သည် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:21 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သူတို့အားကွီးနှစျကျမ်းပိုဒ်များမှာ! ငါသည်သင်တို့၏အကူအညီတန်ဖိုးထား
JacobP • နိုဝင်ဘာလ 24, 2014 တွင် 9:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီ post များအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်! ဒါဟာအလွန်အားတက်စရာနှင့်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်. ငါအရမ်းမှတ်ချက်များကနေထိုးထွင်းသိမြင်ခံစား! သင်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ! ထာဝရဘုရား၏ဓမ္မရာဇဝင်သခင်ဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုခရစ်တော်အားဘုရင်က! <3 ရိုးသားစွာငါစာရေးတံ ချ. ဝေရုန်းကန်ခဲ့ကြ. A lot of times I feel like I'm too bad I won't get any better and I don't really believe with all my heart all my soul and all my mind. I get upset cause I don't put him firstalot. If I did I wouldn't give in to lust. ငါ Tho သူ့ကိုကိုချစ်ကိုသိ. ငါကျေးဇူးတင်ပါ၏! ငါသူငါ့ကိုခစျြကိုသိ! ငါသူတည်းဟူသောငါ၏အပြစ်များကိုဖြေလွှတ်ကိုသိရ. I don't understand why. I'm very shy and fearful. It's very hard to talk and show that I'm proud of believing in God I already feel like I'm gonna be ridiculed or they won't care to hear or talk about God. ငါရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်မထင်ပါတယ်. I'm not ashamed of Christ. I'm ashamed that I don't have all the answers and I can't explain all the details that I don't know enough. And I'm ashamed I'm not going to represent Christ well. ဒါနဲ့ကြောက်ရနဲ့ဆိတ်ငြိမ်ရ. I'm sorry I'm making suchalong comment. But I guess I'm just saying I needed the encouragement! That I'm not alone! ခရစ်တော်သည်အဖြေလွှတ်! I honestly think I amabad Christian and sometimes doubt I'm saved. တစ်ဦးကအများကြီးနောက်ကျငါမူးယစ်ဆေးကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြခြင်းနှင့် alot lusting နဲ့ကျွန်မလဲသေကြပြီနဲ့တူငါခံစားမိခဲ့အကြောင်းမရှိ. Like because I'm using drugs again and lusting even tho I want to stop truly, does that mean I'm not saved anymore?
Rita • ဒီဇင်ဘာလ 11, 2014 တွင် 5:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျမ်းစာ၌ရေးထားဘယ်သို့ငါသညျယရှေုကိုချစ်နှင့်ဈယေရှုနှင့်ဘုရားသခင်၌ truely ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုဘယ်တော့မှနောက်တဖန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်ငြင်းပယ်သို့မဟုတ်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်လိမ့်မည် Cuz ဈကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲသညျယရှေုကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် IAM အမှန်တကယ်စိတ်မကောင်းကြလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖတ်ရသောအခါငါ့မျက်ရည်ရပ်တန့် couldnt. ငါက၎င်း၏ကလူအများကြီးဈဘုရားသခင်၌ငါ၏အ belive အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါငါ့ကိုမိုက်ကြည့်ရှုစေခြင်းနှင့်ငါ့ကို IAM dum သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုခံစားမိစေပါနဲ့ငါ့ကိုယေရှု၌ငါ၏အ belive အကြောင်းပြောဆိုလိုသောမဟုတ်စေရုံကြောင်းသခင်ယေရှု၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဖူးဘူး. ကြောင်းမှားယွင်းတဲ့ဈနောက်တဖန်ကိုယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အဘုရားသခင်နဲ့ယေရှုဖို့ဆုတောင်းယခု မှစ. ဈပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်နှင့်ဈဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်သူ့ကိုငြင်းပယ် wont ကြောင်းပြုပါဘယ်တော့မှလိမ့်မည်. ငါသည်သင်တို့ကိုယရှေုသညျနှငျ့ဘုရားသခငျခရစ်ယာန် IAM နှင့် IAM များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဂုဏ်ယူကိုချစ်. သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းငါ့နှလုံးထိမိရေးသားခဲ့သည်သင်သည်အဘယ်သို့ Flaco နှင့် jacobp ကျေးဇူးတင်ပါသည်. Rita
Latoyah Austin • ဇန္နဝါရီလ 28, 2015 တွင် 10:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
@JacobP: ငါသည်အခြားဘယ်သူ့ကိုမှအဲဒီမှာသင့်ရဲ့အဆုံးသတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားသို့မဟုတ်မပါလျှင်မသေချာဘူး. သို့သော်, ငါတုံ့ပြန်ရန်ဦးဆောင်ခံစားခဲ့ရ: မူးယစ်ဆေးဝါးများလုပ်နေတာ, lusting, မာန်, စသည်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပကတိကလာသောအလေ့အထများရှိပါသည်. သူတို့ကအပွစျမြားနှင့်အပြစ်ရှိပါတယ်, ရိုးရှင်းစွာထား, ဘုရားသခင်ထံမှကျွန်တော်တို့ကိုခြားနားစေသောအရာကိုမဆိုဖြစ်ပါသည်. ယရှေုသညျကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါ,, သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏. ယောဟနျသ 3:16 ကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျမှကြွလာ. ဒါကြောင့်, သငျသညျယာကုပ်အမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်. သို့သော်, အလုပ်ခ / c ကိုယခုပြုသောအမှုမဟုတ်ပါကျွန်တော် re-မွေးဖွားကျွန်တော်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဖိတ်ခေါ်ရမယ် –ယရှေုသညျနိကောဒင်ကပြောကြားခဲ့သည်အဖြစ်, ငါတို့သည်တဖန်မွေးဖွားရပါမည်. ရောမ 12:2 ဒီလောကထုံးစံဓလေ့မရမှကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်၏သက်တမ်းတိုးခြင်းဖြင့်အသွင်ပြောင်းခံရဖို့. နှင့်ဂလာတိ 5:16 ငါတို့သည်ဝိညာဉ်ပကတိ၌တည်လျှင်သူကပြောပါတယ်, ငါတို့သည်ဇာတိပကတိ၏တပ်မက်သောစိတ်ဖြည့်ဆည်းရမည်မဟုတ်. ဒါကြောင့်, ယာကုပ်အမျိုးကို, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း; သို့သော်, ယခုကြှနျုပျတို့ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဟောင်းအပွစျရှိအလေ့အထကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုရပါမည်, အလိုဆန္ဒများ, နှင့်သူ၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အတွေးအခေါ်တွေ– သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်မှတဆင့်. ကျနော်တို့ကိုသန့်ရှင်းစေနေကြတယ်, စင်ကြယ်စေ, နှင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဆေးကြော (အသက်ရှင်သမ်မာကမျြး)- ဧဖက်ကိုးကား 5:25-26. ဇာတ်လမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရား JacobP ဖြစ်ပါသည်: ဟုတ်ကဲ့, သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောနေကြတယ်. ယရှေုသနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသငျသညျကိုခစျြ. သို့သော်, သင်၏အသက်တာအတွက်အပြစ်ဖြေ / ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအဲဒီဒေသတွေအတွက်ခရစ်တော်ထံ၌ငါတို့ကိုမကှာ. ကျနော်တို့သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်နေ့စဉ်ကြှနျုပျတို့၏စိတျသက်တမ်းတိုးရန်နှင့်သူ၏ပုံရိပ်ကိုသို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသွင်ပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုရပါမည်. ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်များဖြစ်ချင်, မရင့်စကားလုံးနဲ့လုပ်ရပ်ကတဆင့်–ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအနေဖြင့်. ဘုရားသခင့ရှင်းလင်းစွာဖြောင့်မတ်ဘို့သင့်ကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း, ရေငတ်မွငျနိုငျ –ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျကိုယ်တော်ကိုချင်ကြဘူး? …ငါတကယ်ကဒီငါ့ညီအစ်ကိုတို့သို့မဟုတ်ညီအစ်မတဦးတည်းကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်.
Femi • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2015 တွင် 7:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကယ်ရီ • ဇွန်လ 1, 2015 တွင် 9:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါအမှုအရာသည်သင်တို့အပေါင်းများအတွက်ကောင်းစွာသွားကြသည်ဆုတောင်းပဌနာ. ဒါဟာဝမ်းမြောက်သောစိတ်များစွာကိုကျော်လွှားရန်အသက်တာ၏အခက်အခဲများနှင့်နေ့စဉ်ရုန်းကန်မှုများဖော်ပြကြည့်ဖို့ငါ့ကိုဆောင်တတ်၏. ငါသည်လည်းအခြားသူများကိုရုန်းကန်တဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့အညီကျမ်းစာလာသည်နှင့်ချစ်ခြင်းနှင့်အတူအားပေးကြည့်ရှုရန်ဝမ်းသာတယ်. အုပ်စုတစုအတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာမလုံခြုံမှုကိုထုတ်ကိုကူညီနေချိန်တွင်ကျနော်တို့အားလုံးရှယ်ယာတဦးတည်းကိုသုံးနိုင်သည်တော်တော်များများအချက်တွေကိုစဉ်းစားပါတယ်. ကမှာဤနည်းကိုကွညျ့ရှု: ငါတို့ရှိသမျှသည်ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုအတွင်း၌တစ်ဦးယုံကြည်မှုစနစ်ကရှိ. တကယ်ကဘာလဲဆိုတာဖော်ပြ “သင်၌” ထိုသို့သင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့သောလူမှကြွလာသောအခါသတ္တိရှိဖို့လိုပေမယ့် “အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုထူးခြားတဲ့စေသည်”, အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး. သင့်ရဲ့မိန့်ခွန်းဘုရားသခင့မေတ္တာတော့လို့ပြောမစိုးရိမ်. အဲ့တာကိုရိုးရှင်းအောင်ထား. ငါတို့ရှိသမျှသည်ပေါလုကိုနဲ့တူမဖွစျနိုငျ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အင်ဒရူးတူနိုငျ. ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ယရှေုသညျ. ငါ့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားစေသည်ဘယ်အရာကိုငါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်: ယရှေုသညျ! ဒီတစ်ခါလည်းအခြားသူတွေငြိမ်းချမ်းရေးမှာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်နှင့်ပါဝင်မဟုတ်သည့်အခါ “အမနာပစကား” ပင်လူတစ်ဦးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်. '' ကျနော်တို့ကယ့်ကိုရှာခြင်းငှါခြီးမှမျးသညျယရှေုကြောင်းကိုသတိရပါ, မဟုတ် Mans> တိုက်ပွဲအထိသိမ်းဆည်းထားပါ, လွယ်ကူရရှိသွားတဲ့ဘယ်တော့မှ. ကြှနျုပျတို့အားလုံးအတူတူလမ်းလျှောက်ပေးနိုင်ပါတယ် , ကောင်းမွန်သောရန်ပွဲတိုက်ခိုက်နေ. ဘုရားသခငျသညျမှနျဘုနျးတျောကိုဖြစ်!
ယောရှု • စက်တင်ဘာလ 12, 2015 တွင် 8:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကေတီ • စက်တင်ဘာလ 18, 2015 တွင် 5:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Austin @latoyah သင်သည်အဘယ်သို့ရေးသားခဲ့သည်အလွန်မှန်သည်! ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုချစ်ပါဘူးကျနော်တို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်. @jacobp ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးခရစ်တော်ထံသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏အပွစျမြားကိုဝန်ခံရမယ် (ဒီနောင်တတရားမှတဆင့်ပြု) ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတရားသောသူတို့နည်းလမ်းတွေကနေဖွင့် (ယေဇကျေလ 14:6). ပြောင်းလဲမှုကိုညဥ့်နှင့်နောင်တတရားကျော်ဖြစ်ပျက်ပါဘူးအဆက်မပြတ် / နေ့စဉ်ဖြစ်ပါသည် ,ငါတို့ပြောင်းပေးဖို့ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်အားကိုယျ့ကိုယျကိုရရှိနိုင်စေသည့်အခါပေမယ့်သူလိမ့်မည်. ငါသည်ထာဝရဘုရားသင်ဤလမ်းလျှောက်၌ရှိကြ၏ညာဘက်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်နဲ့ခရစ်တော်ပြုသကဲ့သို့သင်တို့သည်အပြစ်တရားကိုမုန်းဖို့စတင်လိမ့်မည်ဟုလိမ့်မည်ဟုဆုတောင်းပဌနာ. ငါသည်ခရစ်တော်ခုခံ၏စမ်းသပ်မှုနောက်တဖန်လှည့်ပတ်လာတဲ့အခါသင်ရဲရငျ့စှာပွောဖို့သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်အာဏာအပ်နှင်းမည်ကိုသင်ကျော်ရဲရင့်ကြေညာ! ခရစျတျောကိုသိရန်လာရန်သင့်အားလှည့်ပတ်တခြားသူတွေကိုကူညီ (သင်ဘယ်မှာရှိပါပြီသောသူတို့အားဆက်စပ်နိုင်). ဘုရားသခငျသညျမဟာဗျူဟာမြောက်သောဘုရားဖြစ်သူအမှားတွေလုပ်မထားဘူး, အမှုအရာကမှားသွားပါရှိရာကျွန်ုပ်တို့ဘုရားဖြစ်ကြပြီးအသက်တာ၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ / ရွေးချယ်မှုလုပ်ရန်ကြိုးစားစဉ်းစားသောအခါဖြစ်ပါသည်. ငါသည်သင်တို့ကိုဤမြင်ယခုပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်၌ရှိကြ၏မျှော်လင့်ပါတယ်. လည်းကျမ်းစာကိုဖတ်ရှု, ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လိုညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့တယ် (မဿဲပြီးနောက်အရာအားလုံး) start နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်; ဒါကြောင့်လာမယ့်အရာမှပေါ်ရွေ့လျားရှေ့နစ်နှင့်နားလည်မှုရယူကြကုန်အံ့.
JaniceMNewton • ဒီဇင်ဘာလ 7, 2015 တွင် 10:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ယရှေုကိုမေးရန်ရှိသည် , ကိုယ့်အဝိဇ္ဇာထဲကတစျခုထက်ပိုနည်းလမ်းသူ့ကိုပယ်ကြပြီ, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လောက်ကောင်းမယ့်အခါ, ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အထိုက်တန် feeling, ဒါပေမယ့်သညျယရှေုကိုသွန်းသောအသွေးတော်အလုံအလောက်ထက်ပိုမိုခဲ့.
Justin Mkandawire • ဇန္နဝါရီလ 23, 2016 တွင် 5:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Timmie • မေ 15, 2016 တွင် 10:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. အစဉ်မပြတ်ငါဘုရားကိုငြင်းပယ်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုကိုရှာနေပါတယ်နှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်သစ်ကိုစော်ကား options များနှင့်ငါ့ကိုပေးတစ်ဦးကြီးတွေအကူအညီနဲ့ခဲ့သည်. တစ်ခုလုံး “ဘုရားသခငျသညျစကွာဝဠာအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုမှအဖြစ်မပါသဲလွန်စခဲ့တဲ့ကြေးဝါအသက်အရွယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မွေးဖွားမယ့်အခြားရယ်စရာဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။” မိန့်ခွန်းတစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီးအဟောင်းကိုရရှိသွားတဲ့. ငါနှင့်အတူကတက်ရောနှောနေတဲ့အချိန် “ရောမအင်ပါယာမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ခြွင်းချက်အလုပ်အကိုင်အကြားမှသညျယရှေုခရစျ၏သမိုင်းဖြစ်တည်မှုများအတွက်သမ္မာကျမ်းစာကျမ်း၏အပြင်ဘက်အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။” ပြီးနောက် “အဘယ်သူမျှမပြန်သူတို့တစ်တွေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူဘို့တှငျမှေးဖှားခဲ့သညျမွို့တျောကိုသှားဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အခွန်ပေးဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်. ရောမကလူသည်ယခုအခါနထေိုငျရာသိလိုခြင်းနှင့်ထိုအရပ်၌အခွန်ဝင်ငွေလိုချင်ကြလိမ့်မယ်. ဗက်လင်မြို့သို့ခရီးသညျယရှေုနိုင်အောင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့စာပေကိရိယာ’ ယခင်အနာဂတ္တိအတူတက်စီတန်းမွေးဖွား site ကို. လည်း, ရောမဆိုဤကဲ့သို့သောသန်းခေါင်စာရင်းသို့မဟုတ်အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမျှမှတ်တမ်းများရှိသည်။” မိန့်ခွန်းပေမယ့်ပင်သူတို့အားတစ်ဆယ်စက္ကန့်ကိုမိမိတို့အဘို့စဉ်းစားရန်နှောင့်အယှက်မရနိုငျသောလူကသူတို့ကိုထပ်အများအပြားတစ်ဒါဇင်ကြိမ်အပြီးပင်ပန်းရ. ဒါကြောင့်တစ်ဖန်, သငျသညျ၏တည်ရှိမှုမမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ပြာဖေဖေငြင်းပယ်အသစ်နှင့်တီထွင်နည်းလမ်းများနှင့်ငါ့ကိုပေးဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်. ငါအပြည့်အဝကတန်ဖိုးထား!
ဂျိမ်း Ushie လွန်ခဲ့တဲ့ • ဇွန်လ 18, 2016 တွင် 5:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ်ဒါကိုသဘောကျတယ်; ကြှနျုပျတို့နည်းလမ်းများ Amead ရန်ရှိသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို.
Lamr ः ayes • သြဂုတ်လ 14, 2016 တွင် 5:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Timmie : “ဗက်လင်မြို့သို့ခရီးဆိုတဲ့အချက်ကိုပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့စာပေကိရိယာ” … အမှန် ? သင်အမှန်တကယ်ကဒီယုံကြည် ? ရုံတစျခုမေးခှနျးက,4စကားလုံးမြား … “သငျသညျကမှားနေလျှင်အဘယ်အရာကို”.
အမ်မလီအို • စက်တင်ဘာလ 15, 2016 တွင် 12:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တစ်စုံတစ်ဦးကခရစ်ယာန်တစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့တပြင်လုံးကိုဘဝတွေကိုခဲ့ခဲ့သူပါလျှင်အဘယျသို့, ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရ, မြင်ကြအံ့ဖွယ်အဖြစ်ပျက်, ဤမျှလောက်ပိုပြီးထို့နောက်ဟုတစ်စုံတစ်ဦးမှတစ်ဦးမုသားကိုပြောပြ “ကျွန်မခရစ်ယာန်တယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ငါပိုမိုမြင့်မားတန်ခိုး၌ယုံကြည်”.. ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်?? သူတို့အမှန်တကယ်ကအကြောင်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခံစားရနောင်တရလော့လျှင်?
Sean • စက်တင်ဘာလ 24, 2016 တွင် 10:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟုတ်ကဲ့သူလိမ့်မည်. ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်များကိုနားလည်နိုင်. အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပဲဧဝံဂေလိတရား၏ unashamed ဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်. ဘုရားသခင့တည်ငြိမ်တိုးတက်မှုအတွက်ကြည့်, မရချက်ချင်းစုံလင်ခြင်း.
Brucid • အောက်တိုဘာလ 14, 2016 တွင် 5:19 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကျမ်းကိုဖတ်ပါ2ကောရိန်သု 5:17-19
ဖတ် 1 ယောဟနျ 1:9 လည်း.
ဖေါ်ပြ:6၏ 3.14 – နောက်ဆုံးအိမ်သာစက္ကူအလိပ်
Dennis • နိုဝင်ဘာလ 10, 2016 တွင် 1:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသညျငါ့အကျင့်အားဖြင့် Jeseu ငြင်းပယ့်ထင် (လျှို့ဝှက်ခြင်း) ဒါပေမယ့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်မိတ်ကပ်အဘို့ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
လာရီဂျွန်ဆင် • ဇန္နဝါရီလ 15, 2017 တွင် 1:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒံယလေက • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2017 တွင် 1:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒံယလေက • မတ်လ 24, 2017 တွင် 8:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းသော post ကို.
Marsha • ဧပြီလ 8, 2017 တွင် 4:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်မခရစ်ယာန်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ငါ့စိတ်ကိုငါသညျဘုရားသခငျ၏မှားယွင်းတဲ့ထင်စတင်ခဲ့ရာမှလွှဲပြောင်းယူသူပါလိမ့်မယ်သူထင်လိမ့်မယ်ရန်သူသည်ငါ့ကိုမပို့ခဲ့သည်ထင်ဒီတော့ငါကထောက်ပြဖို့သူ့ထံမှထင်အဲဒီမှာသွားခြိမ်းခြောက်လက်ခံခဲ့သည်ရပ်တန့်မည်မဟုတ် ဘုရားသခင့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖကျြဆီးခွငျး, ပြီးတော့ဘုရားသခင်နှင့်လက်ဝဲယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဆန့်ကျင်နှလုံးကိုခိုင်မာစေ. Thenot မိသားစုထဲကငါ့ကိုမှဘုရားသခင်နဲ့ယေရှုဝန်ကြီးယခုဘုရားသခင်ထံမှခွဲခြာနှင့်ထာ thru ကပြောပါတယ်. ငါသည်အသက်သခငျကဲ့သို့သူတို့ကိုပြန်လက်ခံရယူချင်ပေမယ့်သူတို့ပြန်ခေါ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်. အကူအညီကျေးဇူးပြုပြီး
Rickylee • ဧပြီလ 20, 2017 တွင် 7:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသညျယရှေုခရစျသ; ငါကမျြးစာကိုယုံကြည်သူပါပဲ, ငါသူမင်းရှင်ဘုရင်များနှင့်သခင်ဘုရား၏သရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏ဝန်ခံ!
OdioEmmanuel • မေ 7, 2017 တွင် 3:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
JaketaFenner • မေ 13, 2017 တွင် 10:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါမင်းသမီး! ယရှေုသညျမိနျ့တျောမူ၏! ယရှေုသညျတဝိုက်ငါ့အသက်ကိုလှည့်ထားသည်, ငါမဟုတ်တော့တဲ့ masturbater ဖြစ်ကြောင်းကို, ရှုး(ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ခြင်း), အနိုင်ကျင့်, မုန်း, နှင့်အရာခပ်သိမ်းငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မကြိုက်. တချို့လူတွေကငါကလည်းအဘယ်သို့သောအကြောင်းပြောဘို့ဒါဟာအများကြီးကြာ, ကံကောင်းစွာ, ငါ့အဘို့ဘုရားသခင်ကဤအပွစျမြားကိုကြှနျုပျတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မမူခဲ့သောကွောငျ့ငါ့ကိုပြောသည်မှာအားလုံးဘာမှမယူခဲ့ပါဘူးငါ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမှထိ မိ. လဲစရာဖြစ်ချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မမည်သူမဆိုပြောပြရန်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိ တစ်စုံတစ်ယောက်. ငါကလူအဘယ်သူမျှမကိစ္စကကြာသောအရာကိုသခင်ဘုရားနှင့်အတူဆက်လက်နှင့်မည်သည့်အပြစ်များသင်တို့ကိုကယ်ယူဖို့သူ့ကိုမေးရန်အဘို့နှင့်သင်သည်ထာဝရဘုရား၏အလိုတော်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုချင်ပါတယ်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင့်ရဲ့ကရုဏာကျေးဇူးတော်သည်ဘုရားသခင်၏! ဤခေါင်းစဉ် (3 ဘုရားသခငျသညျငွငျးပယျဖို့နည်းလမ်းတွေ) ငါမှာ google ပေါ်ပေါ်တက်ကိုရှာဖွေနေသောကြောင့်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် “အဘယ်သို့ငါသညျယရှေုကိုပိုမိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်” ငါကလူအရာအားလုံးကျော်သညျယရှေုမိနျ့တျောမူ၏သိလိုခြင်းနှင့်ငါထာဝရဘုရားအဘို့ ပို. ပို. လုပ်ချင်နှင့်ဤသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. ငါသည်ထာဝရဘုရား၏ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်ကြောင်းကိုငါဖုန်မှုန့်ပြန်ဖွင့်သည်အထိငါကြွင်းသောအရာသို့မဟုတ်ငါ့အသက်ကိုအဘို့သူ့ကိုအစေခံပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦးကြီးစွာသောနေ့၌ရှိသည်နှင့်ငါသည်ဤ post ကိုထွက်ရှိသူတစ်ဦးဦးကိုကူညီပေးပါမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်! ပါဝါကိုသခင်ယေရှု၏နာမ၌ရှိပါသည်, သငျသညျသခငျဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ရီ • ဇွန်လ 18, 2017 တွင် 7:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Gaby • အောက်တိုဘာလ 11, 2017 တွင် 7:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
NormanBerry • အောက်တိုဘာလ 15, 2017 တွင် 10:21 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယာကုပ်အားတုန့်ပြန်. ကိုယ့်ပြောချင်ငါသည်ဤအခိုက်မှာငါ့ထံသို့မရရှိနိုင်ရေးသားထားသောကျမ်းစာ၌ပါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. သင်တို့မူကားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်များနှင့်ဤလောကကိုအစိုးရသောအမှုအရာများအကြားကိုက်ခံရလျှင်ကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်. ငါသည်ဤဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းသေတတ်သောသတ္တဝါအားလုံးအတွေ့အကြုံပဲကားအဘယ်သို့သင်တို့အပေါ်မှာကောက်နေမဟုတ်ပါဘူး. တစ်ဦးသောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခံရဖို့လုပျဆောငျရမညျအရာကိုယေရှုနှင့်သညျယရှေုကိုမေးကသူ့ကိုပြောသည်ဘယ်မှာကျမ်းစာ၌ပါသောအာတစ်ပိုဒ်ရှိပါတယ် “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်, သင့်ရဲ့လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူ , ငါ့နောက်သို့လိုက်။” အစ်ကို, ကြောင်းမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ပါသည်! ငါသည်လည်းဆိုပါတယ်တစ်နေရာရာမာကုသည်ယေရှု၏စာအုပ်ထဲတွင်သိလား “ကြောင်းသင်သည်သင်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်တက် ယူ. သင်တို့သည်ငါ့ကိုမခံထိုက်ဖြစ်ကြောင်းငါ့နောက်သို့လိုက်ကြဘူးလျှင်”. ငါလုပ်နေတာနဲ့တူခံစားရပါ? ငါ၏အသေတတ်သောသဘောသဘာဝ၌ငါမကျင့်. ငါကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. သင်ယူနှင့်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်သူကျွန်တော်တို့ကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ပြီးတော့ကိုသေတတ်သောနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုယ်တော်နှင့်သူ၏လမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်မပြီးတော့မိမိသားတော်ရှိခြင်း၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလွတ်လပ်ခွင့်ခွင့်ပြုရာ၌ယဇျပူဇျောအကြောင်းရှင်းလင်းရုပ်ပုံရှိသကဲ့သို့ သာငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏နောက်သို့မလိုက်ကြဘူးသည့်အခါသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားအကြိမ်အသေသတ်ခြင်းကိုနှိပ်စက်ရှိသည်ဖို့အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုဘို့ငါတို့နှင့်အတူဘဝ, ထို့နောက်ငါသူမှာထားတော်မူသောအရာကိုကိုလိုက်နာဘို့ကရကျိုးနပ်သည်ယုံကြည်. ငါသညျယရှေုထံမှညွှန်ကြားချက်ခေါ်ဆောင်သွားနှင့်ငါ့နေ့စဉ်လူနေမှုဖို့လျှောက်ထားခဲ့ကြပြီးကတည်းကငါမရှိတော့ဒီလောကနှင့်ဘဝ၏သားကောင်ခံစားရတယ်. ငါလူနေမှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်နှင့်ကသေးငယ်တဲ့ပုံပေါ်စေခြင်းငှါသော်လည်းငါသည်ဤအသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားမိ. ဘုရားသခင့သင်ယူမှုနှင့်အတူငါ့ကိုကောင်းကြီးထားပါတယ်နဲ့ကျွန်မသိပ္ပံတစ်ဦးဘုရားသခငျ့ဖနျဆငျးသကျသပွေပါဘူးသောပညာတတ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်. ငါတို့ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းသူ့ဟာသူဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးသေတတ်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏ကန့်သတ်မှုကန့်သတ်မထားဘူး. ရဲ့အိုင်းစတိုင်းမှာကွညျ့ကွစို့. ဝမ်းနည်းစရာကသူတစ်ဦးဘုရားသခငျ့ဖြစ်လျက်ရှိတည်ရှိအရာအားလုံးကိုဖန်တီးနိုင်ကြောင်းကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ဘူး, သေးအိုင်းစတိုင်းတွေ့ရှိချက်အားလုံးကိစ္စစွမ်းအင်ကနေဖန်ဆင်းတော်ကြောင်းသက်သေပြ. စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်တစ်အင်အားစုဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုထို့နောက်အင်အားသုံးထူးခြားတ္ထုများသို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းကိုခံရနှင့်ထိုတ္ထုများအချို့တစ်လူနေမှုဖန်တီးမှုဖြစ်လာနိုင်ပါသည်. အချည်းနှီးသောဘုန်းအသရေအတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်သေဆုံးရန်ထွက်ခွာသွားအဲဒီမှာဝဠာဘုရားဖြစ်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်သောအထောက်အထားရှိပါတယ်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမြင့်မားသောမျှော်မှန်းချက်ရှိပါတယ်. ယခုဘဝတစ်ဦးစမ်းသပ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်သူကိုအပေးတော်မူပြီညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူစမ်းသပ်ရှောက်သွားရကြမည်.
Julia • နိုဝင်ဘာလ 1, 2017 တွင် 1:33 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Mathew • နိုဝင်ဘာလ 14, 2017 တွင် 8:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီ post များအတွက်ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါစော်ကား / ကိုညှဉျးဆဲပါ၏အခါတိုင်း(ဒီကလေးဘဝဖြစ်ပျက်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်) ငါအမည်ယေရှုမုန်းစတင်. ဒါကြောင့်ပင်ပြီးနောက်နောက်တဖန်မွေးဖွား , ငါဖြစ်စေတိုင်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးခုထဲကတစ်ခုမှတဆင့်ကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်နေပါတယ်. တောင်မှဝန်ခံပြီးနောက်, ငါကိုယ်တော်လိုက်နာရန်နှင့်ကိုယ်တော်ကိုကိုချစ်ချင်သော်လည်းငါ့နှလုံး၌အမည်သညျယရှေုကိုဦးတည်မုန်းတီးမှုလည်းမရှိ. ငါရုန်းကန်နေပါတယ်. ငါအမည်သညျယရှေုကိုဝန်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်ထံမှထွက်လာရန်မည်သို့ဘယ်လိုရှာဖွေစတင်ခဲ့ပြီးဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ငါက်ဘ်ဆိုက်၌ဤဘလော့ဂ်ကိုမြင်လျှင်. ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သငျသညျယရှေုခရငါ့အချစ်ဦး restore မှငါ့ကိုဆုတောင်းပဌနာနှင့်ပင်ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်သူ၏မေတ္တာ၌တည်ကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်သလား, စိတျဓာတျ, ဝိညာဉ်နှင့်တကွစိတ်ခံစားမှုငါသေသို့မဟုတ်သူ၏ဒုတိယကြွလာမှီတိုင်အောင်ကိုယ်တော်ကိုငြင်းပယ်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့် ?
Mack • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2018 တွင် 8:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းမေတ္တာရှင်လျှင်ကျနော်တို့လုပ်သမျှမိန့်ခွန်းထက်ဘုရားသခင်၏ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားသည်ဟုမထင်. ငါ၏အပြောင်းလဲခြင်းအတွက်နျဆာပထိုမိန်းမသည်အလွန်မတ်ေတာရှိတဲ့နှင့်သူမအမြဲဘုရားသခင်အားခရက်ဒစ်ပေးလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူမအမြဲဖွင့်သူမမှန်မှန်အပေါ်ဆွဲယူလာသည်ကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဆွေးနွေးရန်မယ်လို့. ဒါပေမဲ့, ကြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသူမကြီးပုံကိုမတ်ေတာပါခဲ့. တစ်ဦး Agnostic သကဲ့သို့ငါ၏ဟောင်းတဦးအသက်တာ၌, ကလူရဲ့စကားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကြှနျုပျကိုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုရှိခဲ့. ဒါဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုခဲ့သည်. မည်သို့မတ်ေတာရှိတဲ့သူတို့ခဲ့ကြသည်, ဘယ်လောက်သနားကြင်နာတတ်တဲ့, ဘယ်လိုလက်ခံ. ငါသည်တကယ့်ကိုတိုတောင်းသောကွင်းဆက်အပေါ်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ဝတ်ဆင်. (ရယ်စရာပုံပြင်. ငါ "မှားယှငျး" မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါ့အလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဝှကျထားမည်ဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာကျွန်မမေးလ်ထဲမှာကြာကြာကွင်းဆက်အမိန့်ထုတ်. "မှားယွင်း" ဟုအဆိုပါမေးလ်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းအဆိုပါလက်ဝါးကပ်တိုင်ငါမပြုမီခဲ့င်ဘယ်အရာကိုထက်တိုတောင်းခဲ့တယ်! မက်ဆေ့ခ်ျကိုသခင်ဘုရားရတယ်!) ဒါနဲ့တိုတိုကွင်းဆက်လူတိုင်းကိုငါ့လက်ဝါးကပ်တိုင်တွေ့နိုင်ပါသည်သမျှသောအချိန်ဝတ်ဆင်. သို့သော်မေးခွန်းကြီးသည်ယခု, ငါမေတ္တာရှင်ငါ. ငါသည်ဘုရားသခင်၏ချစ်သောကလေးကအဖြစ်လူတိုင်းလိုဆကျဆံပါနဲ့? ကျနော်တို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်လျစ်လျူရှုနေဖြင့်သညျယရှေုကိုငြင်းပယ်, အဆိုပါအကျဉ်းသား, အိုးအိမ်မဲ့. ယရှေုသညျသူ့ဟာသူလျှင်ဖလား, ကြွင်းသောအရာများ၏အတွင်းပိုင်းကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်စင်ကြယ်သောကပြောပါတယ်. သူကတာရှည်ပဌနာအောင်ကလူကိုယျတျောသညျထကျသီးအခြားပုံရသည်မှမကြိုက်ကြဘူး. ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်နှင့်မတ်ေတာရှိသောအကျင့်ကိုလုပ်ဆောင်ပါလျှင်, ယရှေုကွှေးကျွောခွငျးနေကြတယ်
Mack • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2018 တွင် 10:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Jacobs နှင့်စပ်လျဉ်းကျနော်တို့နေဆဲလွှတ်ခြင်း? ကမျြးစာကခွင့်လွှတ်ခြင်း၏ပုံပြင်များနှင့်ပြည့်ဝ၏. ဒါဝိဒ်သည်ကိုကြည့်ပါပြစ်မှားမိခြင်းနှင့်ပြစ်မှားမိခြင်းနှင့်ပြစ်မှားမိသူကို. ယရှေုသညျငြင်းပယ်တဲ့သူကပတေရုကိုကြည့်ပါ3ကြိမ်နှင့်ဘုရားကျောင်း၏ဦးခေါင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်. သငျသညျယခုဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း. သူတို့ဆိုးကြောင့်ကောင်းတစ်ဦးမိဘရိုးရှင်းစွာမိမိတို့ကလေးစွန့်လွှတ်ဘူး? ဘယ်ဟုတ်မလဲ. ဒါဟာသင့်ကလေးဖြစ်ပါသည်. ဘယ်လောက်ထက်ပိုသောကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘ. ဒါဟာယရှေုသညျမောက်မာအဖြစ်ဤမျှလောက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပြစ်မဟုတ်ခဲ့. ဆုတောငျးလဖာရိရှဲ၏စဉ်းစားပါ, သခင်ဘုရားသည်နိမ့်ကဒီအပွစျရှိအခွန်ခံကဲ့သို့ငါ့ကိုအောင်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်. သူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မခံခဲ့ရ. သို့သော်သူ၏ပေါင်ကိုရိုက်သူကိုနှိမ့်ချအခွန်ခံ, ယရှေုသညျကိုအလွယ်တကူခှငျ့လှတျ. ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဆုတောင်းပဌနာအသက်တာ၌, ငါသည်ဘုရားသခင်၏အများစုကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်သည်ဟုတွေ့ကြုံခံစား. သူကကျွန်တော်ပိုင်ခွင့်ထက်မှားယွင်းတဲ့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့ကြောင်း. သူကအရမ်းနှိမ့်ချကြောင်း (ကျွန်တော်အံ့သြမဖြစ်သင့်. သူကတစ်ဦးနွားစားခွက်မှာမွေးဖွားခံရဖို့ရှေးခယျြခဲ့နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတစ်ဦးအသက်). ဒါဟာကျနော်တို့ဆုတောင်းပဌနာသခင်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းဖို့နှင့်သူ၏အလိုတော်ကိုရှာခြင်းငှါရှေးခယျြခဲ့သည့်အခါသူကဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ်နီးပါးကဲ့သို့ဖြစ်၏. သူကကျွန်တော်သူ့ကိုမရှာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းအပြည့်အဝသိ. ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သူ့ကိုရှာမဖွေတတ်လာသောအခါဒီတော့သူကကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အားထုတ်မှုကိုတန်ဖိုးထား. အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်အဘယ်သူမျှမတာကိုအကိုချစ်နိုင်မည်ထင်သောကြောင့်, WE ကွာသညျဘုရားသခငျတွန်းသူများမှာ. ထိုမျှလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်မလွှတ်. ဒါပေမယ့်သူက Tat ဘုရားသခင်အဘို့ tit မဟုတ်ပါဘူး. အားလုံးအလုပ်သမားတွေသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးနာရီအတွင်းပဲတနေ့လုံးသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိမရှိတူညီသောအခကြေးငွေရ. သူကအမြဲသူ့မေတ္တာအားဖြင့်သင်တို့ကိုခမ်းနားထည်ဝါစွာမှအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ, သာလြှငျသငျသညျသူ့ကိုကွကုနျအံ့ပါလိမ့်မယ်.
mynee • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2018 တွင် 10:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Carla ချားလ်စ် • မတ်လ 6, 2018 တွင် 2:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါပြစ်မှားပြီဟုသိမှတ်လျက်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်. ထိုအခါတမန်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေး, ခရစ်တော်အားဖြင့်. အမြဲဝမ်းသာအဆိုပါ pecuilar အတွက်ငါ.
Nixar • မေ 4, 2018 တွင် 1:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သို့သော်လည်းငါသည်ထိုအပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းကိုအပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်. ကျွန်မဆိုလိုငါနောင်တဖို့လိုအပ်တစ်ခုခုရှိနေတုန်းပဲ– နှင့်သောငါ၏ငြင်းပယ်အချိန်များတွင် unnoticeably ကိုယ်တော်ကို PF ဖြစ်ပါသည်.
ဂျိုး • မေ 24, 2018 တွင် 7:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဘယ်အရာကိုတစ်စုံတစ်ဦးကအားလုံးတရားကိုဟောစတင်သည်သောအခါငါအမြဲပြောပါတွေ့ကြုံရခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြဖြစ်ပါတယ် & တနေ့ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ့်အိပ်မက်ရဲ့နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်…
ကောင်းပြီလျှင်သင့်ရဲ့ဒါကြောင့်လက်ျာဘက် ( ငါသည်သင်တို့တွေဟာမယုံကြည်ကြဘူးရသော) ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်ယာန်တွေကနေထိုင်ခဲ့ကြပါပြီ & ကျနော်တို့ယုံကြည်ဘယ်အရာကိုခစျြ၏ .
(ငါသညျဘုရားသခငျယုံကြည်ဘယ်ဟာ & မိမိသားတော်ယေရှုကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်)
နေ့ကိုကြွလာသောအခါငါတို့ရှိသမျှသည်မြင်ရကြလတံ့. ထိုနေ့ရက်သည်သင်ယုံကြည်ဖို့လိမ့်မည်, သို့သော်သင်တို့အဘို့သိပ်နောက်ကျပါလိမ့်မည်. ငါသည်ငါ၏ဖြစ်ရပ်မှန်အရာကြွင်းသမျှ.
Catherinemeadows • ဇွန်လ 13, 2018 တွင် 9:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ wont ညာဘက်ထွက်လာသူတို့သညျငါ့ကိုသို့မဟုတ်ငါ့စကားနှင့်အတူ aruge သွားကြောက်လန်ဈမည်သူမဆိုနှင့် im ပြောပြရန်ရှက်သေခြင်းနှင့် im အဘို့အကြှနျုပျ၏မိုမာများအတွက်သူ့ကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဈဘုရားအကြောင်းမရှိငြင်းပယ်နိုင်အောင်ရှက်ကြောက်ခြင်းခံစားရပေမယ့်ကိုယ့်ငါ့အစ်ကို jesus chirst ချစ်. ငါ့ ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘနှင့်ဈဘုရားကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံရန်မိမိသားကိုစလှေတျတျောနဲ့အမေ im ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. ဈနှစျခွငျးခံခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကသူ့စကားလုံးယုံကြည်ပေမယ့်ကျွန်မကြောက်လန်၏ရရှိရန်အကူအညီလိုပထမဦးဆုံးသူ့ကိုထားသူ့ကိုယုံကြည်မယုံကြည်ကြဘူး နှင့် affarid နှင့်ရှက်ကြောက်စိတ် yall ငါ့ကိုကူညီခြင်းနှင့်ကိုယ့်အစဉ်အဆက်, ငါ့လုပ်ရပ်တွေထဲကရှေ့၌ငွငျးခုံလျှင်ကိုယ်ကအဖေလိုအပျကွောငျးဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ်စိတ်မကောင်းဖခင် im pls ငါ့ကိုသင်နှင့် jesus name ကိုကိုချစ်ခွင့်လွှတ်အာ
ရောဘတ် • နိုဝင်ဘာလ 17, 2018 တွင် 6:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီ Catherinemeadows ကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်
ငါသည်သင်တို့ကိုမှာထားတော်မူပြီမဟုတ်? မစိုးရိမ်နှင့်ကောင်းမွန်သောသတ္တိ; မကြောက်ပါနဲ့, မဟုတ်သလိုစိတ်ပျက်ဖြစ်, သငျသညျသွားလေရာရာ၌သခင်ဘုရားအဘို့အသင်တို့၏ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။ " (ကမျြးစာကိုကြည့်ရှု, ယောရှုသည် 1:9)
ယနေ့တွင်, ထာဝရဘုရားသည်သင့်အားမိန့်တော်မူ၏, "ကောင်းသောသတ္တိဖြစ်!"
"ထိုအခါသူကပြောပါတယ်, "အိုလူကိုအလှနျခစျြ, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မဟုတ်! ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်ဖြစ်; ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိ, ဟုတ်ကဲ့, ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိ!"ဟုသူကငါ့ကိုမှပြောသောအခါဒါနဲ့ခိုင်ခံ့စေ၏ခဲ့သည်, ဟု, "ငါ၏သခင်စကားပြောဆိုကြကုန်အံ့, သင်တို့အဘို့အကြှနျုပျကိုခိုင်ခံ့စေ၏ပါပြီ။ "" (ကမျြးစာကိုကြည့်ရှု, ဒံယလေက 10:19)
ကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်းချမ်းရေးသောသူ၏ The One လုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုသူကပေးသည်.
ဘုရားသခငျသညျအပျေါ fixed နှင့်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်သူတို့၏မျက်စိစောင့်ရှောက်သောသူတို့သည်ထိုသူတို့၏ဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ချနိုင်ပါသည်.
ကောင်းသောသတ္တိဖြစ်သငျသညျကိုပြောပြသူတစျဦးကသငျသညျတားဘာ သာ. အစွမ်းရှိ၏.
ကမျြးစာကိုနောက်တဖန်ပြောပါတယ်, "ယခုမူကား, အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ , အဘယ်သူသည်သင်ဖန်တီးထားသော, တစ်ဦးကယာကုပ်အမျိုးကို, သငျသညျဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ, အိုဣသရေလအမျိုး,: "ကိုကွောကျရှံ့မဟုတ်, ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူပြီ; ငါသည်သင်တို့၏နာမကိုအမှီအားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါ်ပြီ; မင်းဟာကိုယ့်အတွက်. သင်သည်ရေဖြတ်သန်းရတဲ့အခါ, ငါမင်းနဲ့အတူတူရှိနေမယ်; ထိုအမြစ်များမှတဆင့်, သူတို့သည်သင့်မနစ်မမွန်းရကြလိမ့်မည်. သငျသညျမီးကိုချင်းနင်းသောအခါ, သငျသညျကိုမီးရှို့လိမ့်မည်မဟုတ်, မမီးလျှံညိရကြလိမ့်မည်။ "" (ကျဟရှောယ 43:1-2)
ရဲရင့်ခြင်းရှိကြလော့, ကက်သရင်း. သင်မသိစခွေငျးငှါပတျဝနျးကငျြသူများသည်, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်သင်တို့၏နာမအားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါ် ...! သငျသညျကိုယျတျော၏များမှာ. သူသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိ, ပင်ရုံးတင်စစ်ဆေး၏မီးမှတဆင့်. သင့်ရဲ့အနားမှာကိုယ်တော်နှင့်အတူ, သင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်. ရဲစွမ်းသတ္တိကိုယူ!
ဤ site နေ့တိုင်းငါ့ကိုတစ်ဦးကအံ့ဖွယ်အကူညီပေးသည် Jesus.net
tina Olafusi • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2018 တွင် 11:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မေ • ဇန္နဝါရီလ 26, 2019 တွင် 5:04 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ, ရုံသညျယရှေုကိုငြင်းပယ်, ငါအခါဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျကိုအနာပျောက်လျက်ရှိ 10 နှစ်ပေါင်း, သူကပြည့်တန်ဆာထဲကအကြှနျုပျကို ယူ. ,, သူကတွင်း၏အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါ့ကိုထုတ် ယူ. ,, ဒါဟာငါ့အသက်ကို၌ကြီးသောဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောရှိပြီးကိုယ့်ကြောင့်ငြင်းပယ်, ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြသည် WHAT ကိုစစ်မှန်တဲ့ ne ခဲ့လျှင်ငါ့ဥစ္စာများထဲမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမေးမြန်း, ယခုတွင်ငါသည်ဧဝံဂေလိခဲ့သည်, ငါသည်ငါ့အတိတ်အဘို့အကြှနျုပျကိုကဲ့ရဲ့မှရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့သညျယရှေုကိုငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်ယခုငါမကောင်းတဲ့ခံစားတယ်. :(
ရော်နယ်အောင်နိုင် • မေ 3, 2019 တွင် 10:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယောသပ်သည် Sabiiti • ဇွန်လ 17, 2019 တွင် 9:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အလွန်အားပေးခဲ့တယ်. ကျွန်မအကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြင်ဆင်နေတာပါ3ဘုရားသခင်နှင့်ငါငြင်းပယ်၏နည်းလမ်းတွေသင့်ရဲ့ website မှာအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုတွေ့.
Tracy • ဇွန်လ 23, 2019 တွင် 11:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တခါတရံကျွန်မနက်ရှိုင်းချကျွန်ုပ်တို့သေဆုံးကိုသိနှင့်ထာဘို့သွားကြပြီဖြစ်သောကြောင့်မြေတပြင်လုံးကိုဘုရားသခငျအရာကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းခံစားရစေမယ့်နည်းလမ်းတခုဖြစ်ခဲ့သည်ထင်. ဒါဟာငါ့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားစိတ်ကျရောဂါစေသည်. သို့သော်သေဆုံးခဲ့ကြသူတွေကိုအစဉ်အမြဲသွားပြီထင်ရကြောင့်နောက်တဖန်သူတို့ကိုမြင်ချင်မှဆန္ဒပြည့်စုံချက်နှင့်တူပုံရသည်. ဘဝကအဓိပ္ပာယ်မဲ့ပုံရသည်နှင့်များစွာသောဒီယုံကြည်. တချို့ကရက်ပေါင်းငါယုံကြည်တယ်, တချို့စိတ်ပျက်အားငယ်ချိန်များမှာ. ကျွန်မဖတ်ပါနှင့်လေ့လာမှုကိုစာရေးတံ. နံနက်ငါငရဲလတ်ဒါမှမဟုတ်ဘာအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်?